Cumar Filish oo ka hadlay abaabulkii banaan-baxa ee maalmahaan ka socday magaalada Muqdisho daawo | Dayniile.com
Home Warkii Cumar Filish oo ka hadlay abaabulkii banaan-baxa ee maalmahaan ka socday magaalada...
Cumar Filish oo ka hadlay abaabulkii banaan-baxa ee maalmahaan ka socday magaalada Muqdisho daawo
Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish ayaa ka hadlay abaabulkii banaan-baxa ee maalmahaan ka socday magaalada Muqdisho, isagoo sheegay inay ka guuleysteen kooxihii abaabulayey oo banaan-baxaas ay baajiyeen.
Guddoomiye Cumar Filish ayaa sheegay in midowga musharaxiinta ay shirkii golaha wadatashiga qaranka u gudbiyeen waxii tabasho ay qabeen, balse kooxo gaar ah ay bilaabeen banaan-baxyo uu sheegay in meesha ay ku dambeyn doonaan aan la garaneyn.
“Waxaa soo baxay kooxo leh waxaan qabaneynaa banaab-baxyo waxa ka dhalanaya aan la ogeyn oo aan qeexneyn, ka maamul ahaan waan is-warsanay, marxaladaan lagu jiro iyo in shirkii aysan qeylo ka yeerin markii aan fiirinay, waxaa noo soo baxday in xilligaan aan loo baahneyn banaanbaxyo ay rabshado ka dhashaan,” ayuu yiri Cumar Filish.
Odayaasha dhaqanka caasimadda ayuu Cumar Filish sheegay inay la fariisteen kooxihii abaabulkaas waday iyo maamulka gobolka, iyadoo ugu dambeyntii lagu guuleystay in la baajiyo banaanbaxaas, sida uu sheegay.
“Waxaan u mahad celinayaa odayaashii ka dhaadhiciyey in xiligaan aan loo baaheyn dadkii ku adkeysanaayey in banaan-baxyo ay ka dhigaan gobolka Banaadir,” ayuu yiri Cumar Filish.
Ugu dambeyntii Cumar Filish waxa uu u mahad celiyey dhalinyaradii abaabuleysay banaan-baxaas ee odayaashooda ka aqbalay codsigoodii ahaa inay joojiyaan abaabulkaas.
Hadalka guddoomiye Cumar Filish ayaa u muuqda mid uu ku faanayo in gabi ahaan-ba la joojiyey banaan-baxaas oo ay hor-istaageen, balse xaqiiqadu waxay tahay in waqtiga banaan-baxaas dib loo dhigay oo Axada soo socota la shaacin doono goorta uu dhacayo.
Kadib kulan ay shalay odayaasha dhaqanka Muqdisho la yeesheen guddigii u xil-saaraa abaabulka banaan-baxaas ayaa lagu go’aamiyey in dib loo dhigo banaan-baxa oo Axada soo socota la isugu yimaado shir kale, kaas oo lagu go’aami doono goorta uu dhacayo banaan-baxaas.
Previous articleFaroole & Gaas Oo Weerar Afka Ku Qaaday Boqor Burhaan iyo Cumar Cabdirashiid Daawo
Next articleFeysal Cali Waraabe oo u Hanjabay Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Daawo
Saraakiil ka tirsan Ciidmada Xooga oo sheegay in Al-shabaab ay gubeen...
axmed shiikh - October 20, 2021 0
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal xoogan oo u dhexeeyay Ciidanka Dowladda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa Guutada 9-aad, qeybta 60-aad iyo dagaalamayaasha...
Madaxweynaha Jubbaland oo qaabilay taliyaha AMISOM kalana hadlay dagaalka Al-shabaab
Syria’s displaced people are being housed in ancient locations.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo Villa Somalia ku eedeeyay dagaaladii ka dhacay Boosaaso...
Guddiga Maamulka doorashada Xildhibaanada Labada Aqal ee Somaliland oo la shaaciyey
Kurdish protesters have stormed a chemical weapons base in The Hague
Wasiirka Hore ee Arimaha Dibadda Soomaaliya oo ka shifay Sir culus...
12 qof oo ku dhimatay isbuurasho ka dhacday macbad ku yaalla...
Dagaalka ka socdo caawa magaalada Beledweyn oo u dhaxeeya maamulka gobolka...
axmed shiikh - December 30, 2021 0